Cali Khaliif Galayr: Midnimada Soomaaliya waxaa Hortaagan Dadka Koonfurta Soomaaliya | SAHAN ONLINE
Cali Khaliif Galayr: Midnimada Soomaaliya waxaa Hortaagan Dadka Koonfurta Soomaaliya
Madaxweynaha maamulka Khaatumo Cali Khaliif Galayr ayaa ku eedeeyey dadka kasoo Jeeda koonfurta dalka Soomaaliya iney yihiin kuwa aan ogoleyn midnimada iyo dawlad Soomaaliyeed.
Cali Khaliif Galayr oo hadalkaan ka jeediyey Munaasabad lagu caleema-saarayey Madaxweynaha Galmudug ee Cadaado lagu qabtay ayaa sheegay ineysan dadkaas iyo Siyaasiyiintooda muhiimad siin waqooyiga Soomaaliya.
.”Cid kasta oo hadashay waxay ku cel celinaysay in maamulka gobollada dhexe dhismihiisa lugu xijiyo,dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe,waxay taas tilmaameysa in koonfurta Soomaaliya aan laga dooneyn midnimadda Soomaaliya..”ayuu yiri Galayr.
Waxaa kale oo hadalkiisa ku sheegay in dadka dega gobollada Waqooyi weli ay jiraan dad aaminsan midnimada Ummada Soomaaliyeed balse aan la siin muhiim gaar ah.
Madaxweyne Cali Khaliif Galayr ayaa madax u ah maamul weli aan helin aqoonsi siiba dhanka Dawladda Federaalka ee Soomaaliya ,waana deegaan ay ku muransanyihiin maamulada Puntland iyo Somaliland.
Dawladda Puntland ayaa marar badan sheegtay in dhulka Khaatumo gaar ahaana Sool,Sanaag iyo Cayn ka tirsanyihiin Puntland walow dhanka Somaliland qudheedu ku doodeyso in dhulkaas qeyb ka yahay maamulkeeda.